Primorsky Posad - yokungcebeleka oLwandle Azov: ukuzilibazisa nokungcebeleka. Primorsky Posad: ukuzilibazisa, imvelo nezinsiza
Nge ukufika kwehlobo, abantu abaningi bafuna iseluleko indawo enhle yokuphumula. Iningi labantu e-Ukraine uthanda ukuya oLwandle Azov. On ogwini lwayo eziningi resort amadolobha, kodwa zonke Kwakugcwele izivakashi ngesikhathi kule sizini. Futhi yini okufanele uyenze uma ufuna ukuba uchithe amaholidi kwakho? Primorsky Posad - ikhambi ephelele kulesi simo! Lo muzi Itholakala Azov esifundeni Zaporozhye esifundeni. Uma kuqhathaniswa namanye zokungcebeleka amanani sibuthaka kakhulu, umoya imvelo, futhi cishe ngokuphelele mahhala yiziphi izinto ezinomsindo.
Kafushane mayelana Primorsky Posad
Primorsky Posad - idolobhana elinabantu abantu kungekho kuka-500, itholakala eningizimu ye Zaporizhia esifundeni. Domuzla River ageleza eduze kwayo. Kodwa wayeshaye phansi izimbuku kakhulu kule ndawo. Buhle isikhundla ezindawo ka the sigodi oLwandle Azov. Lokho-ke edonsela eziningi izivakashi abeza lapha eholidini. Primorsky Posad sise ibanga elithileko kusuka emadolobheni amakhulu, izindawo zezimboni kanye nemigwaqo. Ngaleli lungiselelo emoyeni ehlanzekile nezagazovanny.
Isimo sezulu esipholile emzaneni ezwekazini. Warm ehlobo, i lokushisa kwemini +22 ° C. Ebusika, cishe never ashubisa umnkantsha. Ngokuvamile, izinga lokushisa ngalesi sikhathi sonyaka akuvamile lize liba ngaphansi kwe +6 ° C. Kuwo lo nyaka, falling ezingaphezu kuka-380 mm imvula. Ngesikhathi sasehlobo, ku Primorsky Posad setha sezulu cacisa izimvula ngezikhathi ezithile esindayo. Kule nsimu kukhona iziphethu eziningi.
Makalale Primorskiy Posad ilungele Imikhaya enezingane ezisencane. Ukujula yamanzi incane. ngemva nje amamitha 20 kusukela ogwini, ifinyelela 2 m. Ulwandle wotha phakathi May. Ngokuvamile, izinga lokushisa imayelana +20 ° C. Ngo-July, lesi sibalo ukwanda kakhulu futhi +30 ° C, okwenza ukhululekile kakhulu lolwandle iholide. Primorsky Posad ekuqaleni kuka May wavula samaholidi, ozobakhona uSepthemba (izinyanga 5 kuphela).
I ngaphansi kolwandle engajulile, ngaphandle kwezinguquko ngokuzumayo ukujula. Ogwini ikakhulukazi isihlabathi nge inani elincane zasolwandle encane. Ogwini, kukhona amawa nobumba. Phakathi nesivunguvungu, ziba esilufifi, enika amanzi abe luhlaza ngokubomvu. Ukuze ugweme lokhu, eduze nogu zadalwa kusukela ezivimba itshe yemvelo.
Ukuze kube lula izivakashi kungqalasizinda coast bakheka kanjani. Kukhona eyakhelwe ukuzilibazisa izikhungo, amathilomu, zinsiza nasezindaweni zokudlala. Siyabonga kubo, ngeke be bored izivakashi kulezi zindawo ukuze baphumule. Primorsky Posad ukuvakashelwa hhayi kuphela ngenjongo ukubhukuda olwandle, kodwa futhi ngoba amanzi ephulukisa amaminerali nasodakeni-basalt.
The yokungcebeleka kuphela esigabeni ukuthuthukiswa, ngakho ingqalasizinda ayiqondakali athuthukile. Maphakathi zikhona izitolo zokuthenga ukudla, ekhemisi kanye eposini. Ezinye izindaba zika-ukuzijabulisa ngokuyinhloko kanzulu e boarding izindlu kanye nokungcebeleka izikhungo.
Nezokungcebeleka isikhungo "Ithoshi" (Primorsky Posad)
Enye yezinhlangano ezinkulu kunazo izikhungo nekukhibika Primorsky Posad kuyinto "Ithoshi". Lapha, eyinkimbinkimbi inikeza isivakashi yonke ukudla, ebhishi yangasese futhi yokupaka ephephile. Ungakwazi bahlala eyikamelo elilodwa Bungalows namakamelo ekilasini ejwayelekile, standard aphakeme, Deluxe kanye Suites. Zonke anemisila ifenisha kunesidingo. Isigaba amakamelo okunethezeka inikezwa isiqandisi, i-TV, indlu yangasese ngamanzi ashisayo, okuyinto sidla iwashi. Bungalow okokuhlaba ogwini, ayihlomele ngokuhambisana ekilasini umnotho. Nezokungcebeleka isikhungo "Ithoshi" (Primorsky Posad) Izingane imidlalo Igumbi, lapho bangakwazi bahlanganyele obuciko drawing nge abafundisi abafaneleka. Isabelo has a isikhungo sezokwelapha futhi ikamelo massage. Beach ifakwe ilanga loungers kanye baphathe nezambulela. ukusetshenziswa kwabo ngeke emananini, ngakho abafuna ukuba ukukhokha intela eyengeziwe.
Nezokungcebeleka isikhungo "Eldorado" (Primorsky Posad)
Okunye okuphawulekayo asanda kuvulwa ukuzilibazisa isikhungo ngokuthi "El Dorado." Itholakala edolobhaneni Primorsky Posad, ngqo ogwini loLwandle Azov. It has lolwandle lalo. Ukuze yokuhlala inikeza amakamelo nge ifenisha entsha, i-TV kanye esiqandisini. The elingaphakathi has a style classic kanye iyashintsha iyaphupha ibe amathoni. Kunemininingwane ephelele yezizathu namakamelo agcinwa ehlanzekile. Kuncike ngesisekelo yokukhokha non-cash. Kukhona isitolo lapho ungakwazi ukukhokhela Visa and Mastercard. Yonke indawo ivikelwe, kukhona indawo yokupaka, basakaza-Wi-Fi. Ezinganeni wahlela ebaleni lokudlala, inkambu volleyball, uma iqashwe lolwandle izambulela.
Rose Bar (eMoscow): izithombe kanye nokubuyekeza
Incazelo sibhedlela "Surgutneftegaz" e Lermontov